Lammaane Mexican ah oo qaatay diinta Islaamka. | HimiloNetwork
Lammaane Mexican ah oo qaatay diinta Islaamka.
Posted by: Himilo in Dunida Muslimka December 7, 2019	0 409 Views
ISTANBUL (HN) — Lammaane Mexican ah ayaa qaatay diinta Islaamka kaddib markii uu saameeyey taxanaha barnaamijka looga hadlayay halgamayaashii Muslimiinta soo maray oo ka baxa mid kamid ah warbaahinta Turkiga.
Daadihiyaha barnaamijka Abdurrahman Alp ayaa markii uu booqday Maraykanka waxay lammaanayaashani ugu tageen si uu Shahaadada ugu laqimo.
Marka loo eego muuqaal lasoo dhigay barta twitter-ka, lammaanahan waxaa raad ku yeeshay qisada taxanaha ah ee halgamayaashii Muslimiinta. Intaas kaddibna, waxay bilaabeen inay wax kasii ogaadaan diinta Islaamka.
Sidaas awgeed ayay u go’aansadeen inay qaataan Islaamka. Markii ay qaateen Islaamka kaddib, lammaanaha waxaa loo qeybiyay laba nuqul oo tarjumada Qur’anka ah oo ku kala qoran afafka Ingiriiska iyo Esbaanishka.
Previous: Muslimiinta Norwey oo Nuqulo Qur’anka kamid ah u qeybinaya Dadyowga la nool.
Next: Haweeney Masjidkii ay ku riyoon jirtay ka dhistay Las Vegas.
Saameynta daaciga la isku maan-dhaafay – Dr. Zaki Naik
Daawo – Wariye sameynaya tebin toos oo lagu dhacay Biskoolad.